Uhuru Kenyatta Oo Ku Horreeya Doorashada Kenya Iyo Odinga Oo Qaadacay Sida Ay Wax U Socdaan | Radioandalus24
Uhuru Kenyatta Oo Ku Horreeya Doorashada Kenya Iyo Odinga Oo Qaadacay Sida Ay Wax U Socdaan
Iyadoo shalay aroortii dhammaan gobolada dalka Kenya ay ka bilaabatay doorashada madaxtinimada shalay oo dhanna dadku ay codeynayeen ayaa waxaa guddiga doorashada ay bilaabeen inay si horu dhac ah u tiriyaan wareegga koowaad ee doorashada.
Sida ay baahiyeen guddigaas waxaa doorashada ku horreeya Uhuru Kenyatta oo ah hoggaamiyaha iminka talada haya kaasoo tiro badan kaga horreeya Raila Odinga oo ah ninka hoggaamiya mucaaradka dalkaasi.
Iyadoo ay soo baxday tiradaasi horu dhaca ah ayaa saxaafadda waxaa magaalada Nayroobi kula hadlay Odinga oo qaadacay sida wax loo tiriyay isagoo jeediyay tuhmadda ah inay jirto wax is daba marin lagu sameeyay doorashada.
Tirasa horu dhaca ah ayaa muujineysa in Kenyatta uu helay 55.3% halka Odingana uu helay 43.9%,qaadacaadda Odinga waxay caddeyneysaa inuusan aqbali doonin natiijo waliba oo kasoo baxda tirinta codadka doorashada Kenya.
La Soco Halka Ay Mareyso Doorashada Kenya.